Igrama, isipelingi kunye nokusetyenziswa
Izifundo zoLwimi lwesiTaliyane: Ixesha leNtetho yaseNtaliyane
Izenzi zesiTaliyane ezinezintlu ezingapheliyo-ezi zibizwa ngokuba yi-second-conjugation ( seconda coniugazione ) okanye -eet izenzi . Ixesha langoku lexesha eliqhelekileyo-isenzi esenziweyo senziwa ngokuyeka ukuphela okungapheliyo kunye nokongeza iziphelo ezifanelekileyo ( -o , -i , -e , -eamo , -ete , -o ) kwisiqu. Ngokomzekelo wendlela yokudibanisa isenzi esivambileyo sesibini, qwa lasela itafile elandelayo.
UKUQOQULWA KWENKQUBO YOKUPHATHWA KWE- TENSE YE- SCRIVERE ( UKUBHALA )
Mna (io) umbhali (ndibhale) (noi) scriviamo (sibhala)
II (u) ubhale (ubhala, ujwayelene) (voi) ibhaliweyo (ubhala, ujwayelene)
III (Lei) bhala (ubhala, ngokusemthethweni) (Loro) scrivono (ubhala, ngokusemthethweni)
(lui / lei) bhala (yena / ubhala) (loro) scrivono (babhala)
I-akhawunti yesibini-conjugation ( -ere ) yeebenzi malunga nekota enye yezenzi zonke zesiTaliyane. Nangona baninzi uhlobo lwesakhiwo esingaqhelekanga, kukho ezininzi izenzi eziqhelekileyo (jonga itafile elandelayo ngemimiselo) edibeneyo ngendlela efanayo.
IIMVUZO ZEZESIBONDO ZESIBINI
ukunyamezela ukukhanya, ukutshabalalisa; ukujika / ukutshintsha
battere ukubetha, ukubetha
mettere ukubeka, ukubeka
rimanere ukuhlala, ukuhlala
Nangona iifom ezingapheliyo zombini izenzibe zaseNtaliyane zokuqala kunye neyesithathu zixhomekeke ekugxinineni kokugqibela-okanye -eire , izenzi zogqithiso lwesibini zivame ukuvakaliswa ngokugqwesileyo kwi-syllable yesithathu ukuya kwesigxina , njengoko kulandelwa ( PREHN-deh-ray).
Izixhobo zoLwimi lweeNtaliyane
Izifundo zoLwimi : Ulwimi lwesiTali, isipelingi kunye nokusetyenziswa.
Incwadi yeNcwadana yomsindo: Ukuphucula ukubiza kwakho nokwakha isigama sakho.
Ilayibrari yomsindo : Ilizwi lomhla, iilwimi zokuhlala, ii-ABC, iinombolo kunye nencoko.
Indlela yokudibanisa "I-Comporter" (ukudibanisa, Ukuquka, ukuQinisekisa)
Iilwimi zesiTaliyane: iVestire
Indlela yokudibanisa "Ukulawula" (ukuLawula)
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: Ukuhamba rhoqo
Imifanekiso evela kwiNcwadi yeeKells
Iingxoxo zeNtsapho Yomtshato Eya Kukuguqulela Kwinkwenkwezi
Ukukhwabanisa kweKemistry yokuKhupha - Izikhokelo kunye nezimpendulo
UJim Furyk ufumana u-58 wokuqala kwi-PGA Tour History
Ukuguqula iiCubic intshi ukuya kumaCubic Centimeters